Soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha Tayada Sare ee Sare ee 360 ​​Degree oo Muujinaya Dheeraad Dheeraad ah | Wistron
Dib -u -milicsiga Jidadka
Muraayada Jidka Muraayada
Caaga Jidka Caaga ah
Baraha Wadada Cadceeda
SD-RS-SA2 Dheeraad ah Iftiinka Iftiinka Wadada Cadceeda
SD-RS-SA3 waxay Dareemaysaa Aluminium Solar LED Studs Road
SD-RS-SA5 Calaamadeeyaha Rakaabka Wadada Qorraxda ee Solar
SD-RS-SA6 Anti-compress Resistant 30 Tons Indhaha Bisadda Cadceeda
SD-RS-SG2 Muraayad kulul Muraayadda Jidka Cadceeda Solar
SD-RS-SG3 Qorraxda Wadada Laamiga ee Awoodda leh
SD-RS-SG5 Laamiga Qorraxda ee Gudaha ka Iftiimay
SD-RS-SP1 PC Wareegga Solar Cat Cat Indhaha Wadada
SD-RS-SP2 Ultra-thin Solar LED Cat cat eyes Road Studs
Istaraatiijka waddada qorraxda ee la isku waafajiyay
Calaamadda gaadiidka Cadceedda & Iftiin
Iftiinka Gaadiidka Cadceeda
Calaamadda Gaadiidka Cadceedda
Laabista Gaadiidka Koonka
Gawaarida Gaadiidka ee PVC
Heerka Sare ee 360 ​​Degree oo Daran Muraayadda Jidka Muraayadda leh
Midabka: Midabka oo dhan waa la heli karaa
Awoodda Miisaanka: 40 tan kor ku xusan
Kor u qaad milicsiga khadadka calaamadaynta waddooyinka inta roobku da'ayo maaddaama dhalooyinka yaryar ee dhalada ku jira kuleyliyaha aysan ka muuqan biyaha roobka.
Ku hagidda taraafikada jidadka waaweyn ama qalooca qalooca habeenkii marka lagu daro khadadka calaamadeynta waddada, iyo bixinta jawi muuqaal ammaan ah. Guluubyada dhalada ee yar yar ee kuleylka kuleylka ah ayaa si fudud u dhaca; sidaas darteed milicsiga khadadka calaamadaynta waddooyinka ayaa aad hoos ugu dhacaya. Ficilka boodboodka ahi wuxuu ku baraarujin doonaa wadayaasha baabuurta marka ay bedelaan haadka
Ulaha dhalada adag ah waxay ku shaqeeyaan dib u milicsiga. Iftiinka soo socda waxaa dib u soo celiya milicsiga dib -u -jeedin isla jihada saxda ah ee uu ka yimid, 360 digrii. Tani waxay muhiim u tahay taraafikada, maaddaama milicsiga uu ka tarjumayo iftiinka gawaarida dhinac kasta oo dib ugu laabanaya dadka isticmaala waddada, kaasoo ku haga ama ka digaya xaaladaha kala duwan ee taraafikada.
Alaabta Dareemaha Jidka Muraayada kulul
Waxyaabaha Midabka Asalka ah Muraayad kulul oo haysta caag
Awoodda Culayska 40 tan kor ku xusan
Midab Midabka oo dhan waa la heli karaa
Baakadaha Waxaa markii hore ku xirnaa kartoon, iyo 94pcs/ctn
Codsiga Jidka Weyn, Wadada Magaalada
Ulaha dhalada adag ah ayaa ku habboon magaalooyinka iyo miyiga. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa qaybta kaabayaasha, laakiin sidoo kale waxay aad ugu habboon yihiin codsiyada qaab dhismeedka ama qurxinta. Sida iska cad, labada ujeedo ayaa sidoo kale lagu gaari karaa hal codsi.
Ulaha dhalada adag ah ayaa lagu rakibay dusha waddada si loo hago, digniin iyo xakamaynta taraafikada. Iyagu si cad uma muuqdaan fiidkii iyo gudcurka, laakiin waxay kaloo hubiyaan in si fiican loo arki karo isticmaalaha waddada maalintii. Gaar ahaan iftiinka dambe ee qorraxda iyo/ama roobka culus, barafka adag ee dhalooyinka adag ayaa ka muuqan kara calaamadaha waddada, tanina waxay si weyn u kordhineysaa nabadgelyada taraafikada. Tusaalooyinka codsiyada waxaa ka mid ah wareegyada turbo, qaloocyada halista ah, waddooyinka baabuurta ama jidadka waaweyn, barxadaha dadweynaha iyo meelaha baabuurta la dhigto. Eeg sawirada hoose muuqaalka guud ee codsiyada kale.
1. Meel aan indho lahayn oo qalooca ku jirta.
2.High sare ee engegnaanta dusha iyo dusha simbiriirixan; milicsiga wuxuu socon karaa muddo aad u dheer.
3.High xoog iyo cimri dherer
4. Qaybta soo baxaysa waa 100% milicsiga.
5.Sooth siman oo aan sahlanayn in la ururiyo boodh, oo aan u baahnayn nadiifin iyo dayactir.
6. Si buuxda u soo -saaris otomaatig ah oo leh mashiinno.
7.Cimrigu wuxuu 15 jeer ka dheer yahay calaamadeeyaha laamiga caagga ah.
Dammaanad 8.5 sano ah ayaa la siiyaa waddooyinka waaweyn ee adduunka (heerka jebinta wuxuu ka yar yahay 5%).
Hore: Iftiinka Gaadiidka Cadceeda
Xiga: Caaga Jidka caaga SD-RS-P5
Muraayadda Muraayadda Led Road Lead
Muraayadaha Jidka Muraayada
Led Muraayadda Wadada Muraayada
Qorraxda Jidka Muraayadda
Muraayada Jidka Cadceeda Cadceeda leh
Heerka Sare ee 360 ​​Degree Muujinaysa Milicsiga Gla ...
Qolka 801, Dhismaha A, Saldhigga Hal -abuurka Zhongguancun, No.369, Wadada Huiyang, Degmada Jingxiu, Magaalada Baoding, Gobolka Hebei
Su'aalaha ku saabsan alaabtayada ama qiimeeyaha, fadlan noo dhaaf oo waxaan la xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood.
Wadahadalka tooska ah ee WhatsApp!